UEFA: Joel Matip iyo Liverpool oo ku guuleysatay Koobka Kooxaha Yurub - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS UEFA: Joel Matip iyo Liverpool ayaa ku guuleysatay Koobabka Yurub
UEFA: Joel Matip iyo Liverpool ayaa ku guuleystay Koobka Qaramada Yurub
Kani waa xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horreeyay ee riyo u ah Cameroon, kaasoo Liverpool kula guuleystay European Supercup taasoo caado u ah inuu ku guuleysto Champions League marka loo barbardhigo dhiggiisa.UEFA League. Tani waa markii ugu horreeysay ee iska hor imaadkan ay ku lug yeeshaan laba koox Ingiriis ah. Ciyaarta ayaa lagu ciyaaray Beşiktaş Park oo ku taal Istanbul, Turkey. Haddii Chelsea ay seegtay bilowga xilli ciyaareedka ka dib guuldaradii 4-0 ee ka soo gaartay Manchester United, Frank Lampard ayaa ku guuleysan kara koobkiisii ​​ugu horeysay xilli ciyaareedkan.
Kalsoonida ayaa markaa noqon karta dhinaca kale iyada oo wiilasha Jürgen Klopp ay sii ahayeen guushii 4-1 ee ay ka gaareen Norwich City ka dib guuldaradii Community Shield ee ka dhanka aheyd Citizens. Markay ahayd Reds, Tababaraha reer Jarmal wuxuu sii deyn lahaa 4-3-3 oo uu haysto ninka haysta Mané. Ka soo horjeed, Lampard wuxuu sidoo kale doorbiday mashruucan isagoo Giroud caarada iyo Kanté dhexda ku jira.
Jawiga aad ufiicnaa, Reds waxay ku soo noqdeen si ka wanaagsan qaab ciyaareedkooda, iyagoo si gaar ah u celiyay Blues. Mané (5e) iyo Fabinho (9e) shiday qufullada koowaad laakiin Christensen iyo Kepa ayaa dhexgalay. Markii la yaabay, Blues waxay dib u heshay niyaddooda iyadoo Salah uusan ka fogeyn gooldhalinta furitaanka. Oo Kepa wali wuxuu badbaadiyey ciyaarta wajigan wajiga (16)e). Ragga Frank Lampard waxay si tartiib tartiib ah uga soo baxayeen badhkood dhulkoodii. Kadib isku daygii ugu horreeyay ee Giroud (16)e) iyo soo laabashada wanaagsan ee Robertson dusha sare (21e), Pedro ayaa abuuray fursadii ugu horeysay ee Chelsea. Dhanka bidix, garabka Isbaanishka ayaa gacanta ku haaya bidix wuxuuna arkay toogashadiisa oo ku dhacday isgoyska (22)e). Blues si cad ayay ula wareegeen. Qoraa bilow wanaagsan oo ciyaarta, oo ay kujirto ciyaar aad u wanaagsan oo ku soo laabatay goolka, Giroud ayaa markaa isku dayey soo laabashada kaasoo ka cararayay jaaniska (24)e). Koox kastaa waxay abuurtay qatarta waxayna Reds sugayeen geeska inay ka walwalaan Kepa. Goolhayaha reer Spain ayaa arkay markii ugu horreysay ee Van Dijk uu madaxa ka gudbo (29)e) kahor qabashada Mané (30e).
Labada xamaaliye habeen weyn
Laakiin Blues waxay heshay fursadihii ugu weynaa. Oogada hore ee ciyaarta, Pedro wuxuu kubad dhex jiiday Kovacic kaasoo isku dayayay inuu cirib tiro Adrian. Si dhakhso ah ayaa loo sii daayay, goolhayaha Liverpool ayaa ku guuleystay labadiisa (32)e) laakiin kan ayaa ku dhacay ficilka xiga. Kubad wanaagsan oo ka timid Pulisic, Giroud wuxuu ku furay natiijada iyadoo iskutallaabta laga soo qaaday bidix (36)e, 0-1). Ma ahan mid caan ah bilowgii hore, ciyaaryahankii hore ee BvB ayaa markaa isu beddelay gooldhalin laakiin guushii uu gaadhay waa loo diiday bannaanka (40)e). Fasaxa, Chelsea ayaa ku jirtay safka hore. Ka dib xilligii xumaa ee Oxlade-Chamberlain, Jürgen Klopp wuxuu go’aansaday inuu ficil sameeyo isla markaana uu ku bedelo ninka Ingariiska ah Roberto Firmino. Xulasho lacag bixin degdeg ah. Wuxuu ku daboolay Azpilicueta oo loo adeegsaday Fabinho, weeraryahanka reer Brazil ayaa kubad u dhex dhigay Mané kaasoo barbareeyay rikoorka Kepa (48)e, 1-1). Isbarbardhigaas, kooxda heysata horyaalnimada Yurub kama aysan bixin dhanka kale. Fabinho ayaa si dhif ah u seegay sharciga (50)e) halka Henderson uu kubada u diray gacantiisa Kepa isagoo kubad daciif ah (52e).
Blues runtii ma aysan arag iftiinka maalinta iyo dhowr daqiiqo oo jilicsan ka dib, Frank Lampard wuxuu tuuray Abraham iyo Mount, isagoo soo bixinaya Giroud iyo Pulisic (74e). Laakiin fursadihii had iyo jeer waxay ahaayeen casaan. Dhinaca geeska ah ee Reds, Kepa wuxuu badbaadiyey dhismihiisa isagoo ku sameeyay bandhig faneed cajiib ah labo jeer ka hor Salah iyo Van Dijk (75e). Chelsea ayaa ku jawaabtay xitaa iyadoo laga dhaliyay Mount laakiin waxaa loo diidey offside (83)e). Shaqo ka dib Mané (86)e) iyo madaxa Zouma (90e), Stéphanie Frappart waxay ku dhawaaqday dhamaadka waqtiga nidaaminta. Labada kooxba waxay ka qeyb qaateen kordhinta. Mané si dhakhso ah ayuu u helay Iftiinka cirifka Kepa si uu u siiyo Reds faa'iidada (95)e, 2-1) laakiin farxaddu muddo gaaban ayay ahayd markii ay Chelsea heshay rigoore qalad Adrian ee ku aaddan Abraham (99e). Jorginho wuu rogmaday wuuna beddelay (101e, 2-2). Blues ayaa markaa kadib riixday guul laakiin Adrian ayaa duulay isku day ka yimid Mount (113)e), kahor intaadan arkin Pedro ee ku xiga (114e). Sidaa darteed waxaa lagama maarmaan noqotay in laga gudbo rigoorooyinka, Liverpool ayaana ugu dambeyntii ku guuleysatay fadhiga si ay ugu guuleystaan ​​Koobkaan Yurub.
Ninkii Ciyaarta: Adrián (8) mudadiisii ​​ugu horreysay ee uu la joogay Liverpool bedelka Alisson, kubka ayaa dhaawacmay, kulan weyn oo uu wax badan ka qabtay. Wuxuu galay talaabada ugu horeysa, isagoo sii daayay kubad laba gacan qaad ah oo ka socota geeska xiran ee Pedro (17)e) ama ku riixay durbaanlaha reer Spain durbaanka korantada (22e). Goolhayihii hore ee West Ham ayaa maareysay wajigiisa ka hor kulanka Giroud (27)e) iyo Kovacic (32e), ka hor inta aan lagu garaacin iskutallaabtii Faransiiska (36)e). Shaqo badan ayuu qabtay ka dib nasashada. Offside-ka Mount wuxuu ka hor istaagay inuu gaaro yool cusub (83)e). Go'aan cusub oo ka soo horjeedda Ibraahim ayaa hor istaagay sinaanta (99)e), laakiin isagana waxaa lagu ganaaxay inuu qalad ku galay lambarka 9 kaasoo keenay rigoore, oo uu beddelay Jorginho (100)e). Gacantiisa adag ee looga soo horjeeday toogashada Mount ayaa ka badbaadisay guuleystayaasha C1 gool saddexaad (113)e). Wuxuu joojiyay ciqaabta muhiimka ah ee magaca u siisay lamaanayaasheeda inta lagu gudajiray toogashada.
Ka waran xiddiga heerka caalami ee reer Cameroon ?
Matip (6,5): qoraa shot koowaad ee ciyaarta madaxa (6)e), wuxuu qabay dhibaatooyin qaar inuu faragalin ku sameeyo Pedro bilowgii ciyaarta. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu maamulay dhamaan tamaalladiisa halka baasaska Chelsea ay ahayd inay jabiyaan khadadka. Si kastaba ha noqotee, wuxuu ka mid ahaa kooxdii ciyaartooy ee laga tirtirey baaskiilka Pulisic ee goolasha furitaanka ee Giroud (36e). Marka xigta, sida saaxiibkiisa daafaca ee daafaca, aad ayuu u difaac badnaa, inkasta oo da 'yarta ciyaartoydii Frank Lampard, ay ciyaarta kusoo noqdeen.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.camfoot.com/les-lions-en-club/uefa-joel-matip-et-liverpool-remportent-la-supercoupe-d-europe,30160.html
Tababaraha kooxda Atlanta United Boer ayaa ka qoomameeyay doorashada ereyada